भट्टराईले ८ नम्बर दिएको ‘वडा नम्बर ६’ लाई हिसिलाले किन दिइन् ११ नम्बर?
सेतोपाटी, काठमाडौं, असोज ५ print
बायाँबाट क्रमश: संचारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल,पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा फिल्मका निर्देशक उज्वल घिमिरे
सोमबार उज्वल घिमिरे निर्देशित 'वडा नम्बर ६' हेरेका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले फिल्मलाई १० मा ८ अंक दिएका छन्।उनीसँगै सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल तथा भट्टराई पत्नी एवम् एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीले फिल्म हेरे।
फिल्म हेरेपछि यस्ता चलचित्रहरु बन्ने हो भने विदेशी चलचित्रहरुको प्रभुत्व घट्ने र नेपाली फिल्मले प्रश्रय पाउँने भट्टराईले १० मा ८ दिन्छु भने। भट्टराईले ८ अंक दिएको फिल्मलाई पत्नी हिसिलाले १० फुलमार्कमा एक नम्बर थपेर ११ नम्बर दिइन्।
‘नेपालको युनिक एक्सपेरिमेन्टल चलचित्र हो वडा नम्बर छ, त्यसैले यो चलचित्रलाई ओस्कार पुर्याउनै पर्छ’ हिसिलाले भनिन्, ‘यो चलचित्रलाई म १० मा ११ दिन्छु ।’ उनले भनिन्।
भट्टराईले चलचित्र हेरिरहँदा जनयुद्वको पलहरुलाई सम्झिएको सुनाए। त्यस्तै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि फिल्मको प्रशंसा गरेका छन्। उनले आफ्नो पेजमा 'जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमिमा आधारित नेपाली चलचित्र 'वडा नं छ' हेर्ने अवसर मिल्यो! फिल्म स्वस्थ मनोरंजनात्मक र वस्तुपरक छ! बधाई पूरै टिमलाई' भनेर पनि पोस्ट गरेका छन्।
यता सुचना तथा सञ्चारमन्त्रीले नेपालको समसामयिक राजनितिलाई पृष्ठमा राखेर रमाईलो कमेडी चलचित्रले प्रस्तुत गरेको रहेछ, सिनेमा हेरेर धेरै हाँसेको प्रतिक्रिया दिए। सिनेमा हेर्न चलचत्रि विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई सहित बरिष्ठ सिनेकर्मी अशोक शर्मा आदि उपस्थित थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ५, २०७२ ०९:०९:०८